Maleeshiyaad la Wareegay Bar-koontorool Oo ku Taal Garoonka Diyaaradaha Beledweyne |
Maleeshiyaad la Wareegay Bar-koontorool Oo ku Taal Garoonka Diyaaradaha Beledweyne
Wararka laga haleyo Magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan maleeshiyaad hubeysan oo ka amarqaata sarkaal lagu Magacaabo Janeraal Abuukar xuud ay la wareegeen Bar-koontorool oo ku taalla Magaalada Beledweyne.
Maleeshiyaadkaan oo ka careysan sida ay u dhacday doorashadii lagu qabtay Magaalada Jowhar ayaa sidoo kale kasoo horjeeda in safar uu Beledweyne ku tago Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe, waxaana ay ka yimaadeen dhinaca degaanka Ceel-gaal oo oo qiyaastii 13 km u jira Magaalaa Baladweyne.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in maleeshiyaadkaas ay la wareegeen Bar-koontorool oo ay ku sugnaayeen Ciidamada Booliska Hir-Shabeelle, isla markaana lagu qaadi jiray Canshuurta una dhow Garoonka Diyaaradaha Beledweyne.
Afhayeen u hadlay maleeshiyaadka hubeysan ayaa Warbaahinta u sheegay inay kasoo horjeedaan in uu Magaalada Beledweyne tago Madaxweynaha Cusub ee Maamulka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, isla markaana si nabadgelyo ah ay Gudaha & daafaha Magalada Beledwyene ku joogi doonaan.
Dhinaca kale Saraakiisha Ciidamada AMISOM ayaa kulan kula qaatay duleedka Magalada Beledweyne horjoogayaha maleeshiyadka ka amar qaata Janeraal Abuukar Xuud, waxaana ay ka wada hadleen sidii amaanka loo xoojin lahaa & in maleeshiyaadka laga dul qaado Garoonka diyaaradaha Beledweyne.
Wararka kulankaas laga helay ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada AMISOM ay balan qaaden in la xalin dono tabashada ay qabaan, waxaana jira kulamo kale oo Beledweyne ka socda kuwaas oo la doonayo in lagu xaliyo tabashada ay qabaan maleeshiyaadka uu hogaamiyo Janeraal Abuukar Xuud.